Fantatry ny maro ary indrindra ireo mpianatra toekarena ny amin’ny fahaiza-manao fahaiza-mampita ary ny fahazotoan’ity mpampianatra toekarena ity. Ambetiteniny ny hoe hampihatra sy hampihavana ny zavatra azo amin’ny fikarohana sy ny fampianarana ambony ary ny fampandrosoana mifanaraka amin’izay eny amin’ny Oniversitan’Antananarivo. Nampiavaka azy ihany koa ny nilazany ny amin’ny tsy maintsy hitodihan’ny Oniversite amin’ny angovo azo havaozina ka tsy hiantehitra be intsony amin’ny JIRAMA rehefa izy no lany. Eo ihany koa ny fandriam-pahalemana eny amin’ny anjerimanontolo izay nanambarany fa hampiasana ireo teknolojia manaraka ny fandrosoana amin’izao fotoana izao. Teny filamatra nentiny moa ny hoe “ny marina, ny mangarahara, ny mampihavana”.